I-Apple iphanda iindlela ezintsha zokutshaja (ngesandla?) Kwizixhobo zayo eziphathwayo | IPhone iindaba
I-Apple iphanda iindlela ezintsha (zemanyuwali?) Zokutshaja kwizixhobo eziselfowuni
Izixhobo eziphathwayo kunye nezinokunxitywa zenza imitsi emide malunga nayo yonke into. Ngalo lonke ixesha sinezikrini ezingcono, ii-eriyali ezingcono, isoftware enamandla ngakumbi kunye nayo yonke into iphucula ngokukhawuleza okukhulu, kodwa kukho into emileyo: iibhetri. Zininzi iinkampani eziphanda ukwazisa isizukulwane esilandelayo seebhetri, kodwa oko akuthethi ukuba kufuneka uyeke ukuphanda, umzekelo, iindlela ezintsha zokutshaja esivumela ukuba sandise ukuzimela kwesixhobo.
Ngokutsho kwelungelo elilodwa lomenzi wenziwe esidlangalaleni namhlanje, ngoLwesine, nge-16 kaFebruwari, iApple iphanda izixhobo zokutshaja ezinokukwazi ukuvelisa umbane ngokuhamba. Kodwa yehlisa ulangazelelo lwakho kancinci ukuba ucinga ukuba le ntshukumo iyakuba yeyesihlahla; eyiphi singayihambisa iya kuba livili elifana nelo leewotshi zakudala kwaye siya kuhlawulisa iwotshi njengoko sisenza ngokugada iiwotshi endingenobuganga bokutsho ukuba siyeke ukuzisebenzisa ngowuphi unyaka.
Apple patent indlela entsha yokutshaja
Nangona i-patent, iyafumaneka esi sixhobo, Inzima kancinci kunamavili alula avumela ukuba sibize iApple Watch, asinakucinga ukuba yile nto kanye. Ngokwam, kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba abo baseCupertino bongeze lo msebenzi kwiwotshi yabo ebukhali okanye kwi-iPhone yabo, into leyo ikwanayo nelungelo elilodwa lomenzi. Ngaba unokucinga ukuba umntu uhlawule amakhulu ee-euro kwi-smartwatch echitha lonke ixesha layo ukuguqula ivili ngokungathi linewotshi ukusuka kwi-30 okanye ngaphezulu kwiminyaka eyadlulayo? Ngapha koko, nayo Kuya kufuneka sibone ukuba sizuza kangakanani ukuzimela emva kokuba ujike ixesha elingakanani ivili lomthwalo.
Ngokoluvo lwam, into efunwa ngu-Apple ngale patent kukuba akukho mntu usebenzisa umbono abenawo, amalungelo awodwa abenzi boluntu nawo ayayisebenzela loo nto. Kodwa eyona nto inomdla ngakumbi kukuba bayaphumeza inkqubo yokutshaja, efumaneka kwiiwotshi ezininzi, ezibiza iApple Watch okanye i-iPhone ngeentshukumo zethu. Okanye uthathe i-plunge kwaye uqalise isizukulwana esilandelayo seebhetri. Ingaba ucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » I-Apple iphanda iindlela ezintsha (zemanyuwali?) Zokutshaja kwizixhobo eziselfowuni
I-Apple ibhengeza iWWDC 2017 ukuba iqhubeke ngoJuni 5-9
Inest ihlaziya usetyenziso lwayo oluphucula unxibelelwano nezixhobo zalo ezifanelekileyo